Sida loo tirtiro taariikhda waxqabadka koontada Google | Androidsis
Sida tooska ah looga tirtiro taariikhda waxqabadkaaga koontada Google
Bilowgii Maajo, Google wuxuu ku dhawaaqay taxane ah isbadalo qarsoodi ah oo aad muhiim u ah, in aan hore kuugu sheegnay. Midkood waa suurtagalnimada si toos ah u tirtir taariikhda waxqabadkaaga koontadaada. Wax waqti ka waqti dhici kara. Laakiin tan si ay u shaqeyso, waa inaan marka hore qaabeyno xulashooyinkaas. Warka fiicani waxa weeye in tan aad samaysaa ay tahay mid aad u fudud.
Sidan oo kale, waxaan ku dooran karnaa markaan rabno xogta taariikhda waxqabadkeena waa la tirtiray. Waxaan si toos ah uga sameynaa koontadayada Google. Si tan loo sameeyo, waa inaad raacdaa talaabooyinka qaarkood ee taleefanka ama kombiyuutarka, laakiin way fududahay. Waxaan kuu sheegaynaa waxa xiga ee aad samaynayso.
Isbeddeladan la soo bandhigay, waxaan u sheegeynaa Google inta xogtan ay sii jiri karto. Shirkaddu waxay soo bandhigtay laba ikhtiyaar oo ku saabsan arrintan, kuwaas oo aan ka dooran karno. Sidaa darteed isticmaale kasta waa inuu go'aansadaa labadooda midka ugu fiican xulashadooda. Si tan loo qaabeeyo, waa inaan raacnaa talaabooyinkan.
Sida loo arko loona tirtiro taariikhda isticmaalka arjiga Android
1 Tirtir taariikhda waxqabadka si toos ah
2 Tirtir taariikhda waxqabadka gacanta koontada Google
Tirtir taariikhda waxqabadka si toos ah
Waa inaan ka furnaa barnaamijka Google taleefankayaga ugu horreeya marka hore. Codsiga dhexdiisa waa inaad gujisaa tabta Dheeraad ah ka dibna waa inaan raadino oo gujino ikhtiyaarka Hawlaha Goobidda. Marka xigta, waxaan eegnaa kaarka «Ikhtiyaarka Waxqabadka ee Webka iyo Codsiyada waa la hawlgaliyay», halka aan ku khasban nahay dhagsii qaybta loo yaqaan Beddel dejintan.
Waxaan horeyba ugu jirnay qaybtaan, halkaas oo aan awood u yeelan doonno inaan ku dooranno ikhtiyaarka aan u aragno inuu ugu habboon yahay. Shirkaddu waxay na siisay xulasho kiiskan inta udhaxeysa seddex bilood iyo 18 bilood. Waa inaan dooranaa mid ka mid ah labadan ikhtiyaar, illaa iyo inta aan dooneyno in taariikhdan waxqabad si otomaatig ah loo tirtiro, annaga oo aan sameynin wax aan ku sameyno. Mid kasta waa inuu tixgeliyaa waxa uu u arko inuu yahay midka ugu habboon, marka la dooranayo waqti.
Markii aan mid dooranay, waa inaan xaqiijinaa oo Google wuxuu noo sheegi doonaa in doorashadan horeyba loogu calaamadeeyay kumbuyuutarka. Marka waa midda dhaqan galaysa, taas oo keeneysa in taariikhda waxqabad si toos ah loo tirtiro waqtigaas kadib, taas oo kuxiran waxa aan ku dooranay kiiskeena qaaska ah. Haddii sabab kasta ha noqotee aadan ku faraxsanayn, waxaad haysataa wakhti kasta suurtagalnimada inaad bedesho ikhtiyaarka markasta oo aad rabto, adigoo raacaya isla talaabooyinkaas.
Sida loo arko taariikhda dib u eegista isbeddelka Google Play
Tirtir taariikhda waxqabadka gacanta koontada Google
Waxaa jiri kara isticmaaleyaal aan rabin hawshan waxaa lagu fuliyaa gacanta telefoonka. Xaaladdan oo kale, Google waxay sidoo kale bixisaa suurtagalnimada in lagu tirtiro taariikhdan gacanta. Marka waxaan nahay kuwa doorta marka aan dooneyno inaan ka takhalusno kiiskeena. Maxaa u oggolaanaya xorriyad dheeri ah, maadaama ay noqon karto dhowrkii biloodba mar ama si fudud markaan xusuusanno. Waa ikhtiyaar kale oo la heli karo. Si looga faa'iideysto, runti maahan inaan wax qabanno, maaddaama sida caadiga ah ay tahay ikhtiyaarka badanaa la calaamadeeyo.
In kasta oo haddii aan mar uun qaabeynay inay ahayd in si otomaatig ah loo tirtiro, laakiin aan beddelnay maskaxdeenna, waa inaan mar labaad u qaabeynaa, kana dhignaa inay u shaqeyso sida aan doonayno kiiskan gacanta. Tan awgeed waa inaan raacnaa isla talaabooyinkii hore:
Ku fur barnaamijka Google taleefanka
Guji tabta More
Guji xulashada waxqabadka Raadinta
Tag kaarka «ikhtiyaarka Waxqabadka ee Webka iyo Codsiyada waa la hawlgaliyay»
Dhagsii Beddel dejintan
Xullo Keydso illaa aad gacanta ka tirtirto
Tallaabooyinkan ayaan ku qaabeynay taas taariikhda waxqabadka ee koontadayada Google ayaa gacanta lagu tirtiri doonaa. Marka waxaan go'aansanaa goorta aan dooneyno inaan ka tirtirno kiiskeena. Kaliya waxaad u baahan doontaa inaad gasho qaybtaas si aad u tirtirto markasta oo aad rabto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Khiyaamada Android » Sida tooska ah looga tirtiro taariikhda waxqabadkaaga koontada Google
Samsung Galaxy A30 hadda sidoo kale waxaa lagu heli karaa midab cad
NVIDIA waxay ku shaqeysaa Sanduuqa TVga cusub ee Android oo leh astaamo lala yaabo